Latsaky ny 10%-n’ny Tontolo Ambanivohitra Afrikana Atsimon’i Sahara No Mampiasa Herinaratra. Inona No Atao Mba Hanovàna Izany ? · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Andrew Kowalczuk
Voadika ny 08 Oktobra 2014 18:22 GMT
Vakio amin'ny teny Português, English, Deutsch, Español, 日本語, Nederlands, Italiano, Français
Takelaka fandraisana ny herin'ny masoandro any amin'ny nosy Bazaruto, Mozambika. Sary avy amin'i Cotrim. Public Domain CC0
Nanambara ny Banky Iraisam-pirenena tamin'ity lohataona ity fa hanome 5 lavitrisa dolara Amerikana ho an'i Afrika ho fanampiana io tanibe io hanatsaràny ny famokarana herinaratra ao aminy. Ny famokarana herinaratra amin'ny alàlan'ny tohodrano no tena ifantohan'io io hetsika io, ankoatry ny zavatra hafa. Mbola tena sahirana mantsy i Afrika noho ny tsy fahampiana goavana amin'ny herinaratra, singa iray misakana ny fandrosoana, na dia haingana aza ny firoborobon'ny toe-kareny faritra misy azy.
Marobe ireo hetsika ataon'ireo vondrona tsy miankina sy ny fanjakana mba hampitomboana ny isan'ny olona mampiasa herinaratra, saingy lavitr'ezaka ilay asa. Miaina aty Afrika ny dimy ambin'ny folo isanjaton'ny mponina maneran-tany, nefa ny 3 isanjaton'ny herinaratra ampiasain'izao tontolo izao fotsiny no jifainy. Ny tsy fahampian'ny ho enti-manana sy ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa dia midika fa tsy maintsy miray mba hanomezana hery sy hampivondronana ny ezaka ho fampandrosoana an'i Afrika ny fanjakana sy ireo vondrona tsy miankina. Amin'izao fotoana izao, ohatra, dia mitondra ireo karazana tetikasa hamatsiana herinaratra io tanibe io ny Électricité de France (EDF), orinasam-panjakana Frantsay miandraikitra famokarana herinaratra.
Latsaky ny 10 isan-jaton'ny mponina ambanivohitra any Afrika Atsimon'i Sahara no mahazo herinaratra.
Ankehitriny dia tanibe feno fampanantenana sy manan-karena harena voajanahary i Afrika, mbola tanora anaty dingam-pivoarana. Izy ihany koa no ilay tany antsoina amin'ny fiteny poetika hoe ” fiarahamonina anatin'ny haizina tsy misy fiafaràny” noho ny fahavitsian'ny herinaratra any amin'ny ankamaroan'ny firenena ao aminy. Mponina eo ho eo amin'ny 600 tapitrisa eo ho eo no tsy manana jiro ny taona 2014. Manodidina ny 42 isanjato ny tahan'ny famatsiana herinaratra manerana ny taniben'i Afrika.
Na dia iray amin'ny ambany indrindra eo amin'ireo firenena rehetra vao misandratra aza io tarehimarika io, raha tsy ny ambany indrindra aza, dia mbola io ihany koa no anton'ny tsy fitoviana misongadina any amin'ny faritra. Raha 99 isanjato no manana jiro any Maghreb dia ny 31 isanjato fotsiny kosa no manana izany any Afrika atsimon'i Sahara. Mbola olan'ny tsy fitoviana ihany koa izany noho ny fisian'ny elanelana mampisaraka ny tontolo an-drenivohitra sy ny tontolo ambanivohitra. Ny sivy amby enimpolo isanjaton'ny tanàn-dehibe dia misy herinaratra avokoa raha toa ka eo ho eo amin'ny 25 isanjato fotsiny ny faritra ambanivohitr'i Afrika. Noho io antony io, latsaky ny 10 isanjaton'ny vahoaka any ambanivohitra Atsimon'i Sahara no afaka misitraka ny herinaratra.
Ireny tarehimarika ireny dia taratry ny tsy fahampian'ny enti-manana ao amin'ny tanibe izay sady miezaka misarika ireo mpampiasa vola no mikarakara ihany koa ireo orinasa natokana hamatsy herinaratra ao amin'ny firenena io isa io. Anatin'ny fikarohany tombontsoa ireo mpampiasa vola dia mifanehatra amin'ny 70 isanjaton'ny vahoaka izay mivelona amin'ny latsaky ny 2 dolara isan'andro, fidiram-bola tsy maharakotra akory ny lany na dia ny fandaniana kely indrindra amin'ny fampiasana herinaratra aza. Fanampin'izany dia voatery mampiasa ireo fotodrafitr'asa mavesatra sy efa antitra izay tsy antenaina hampidi-bola, amin'ny alàlan'ny fifantohana fotsiny amin'ny fivarotana ny ampahan'ireo orinasa mikarakara ny herinaratra. Eo anatrehan'izany tsy fahampiana renivola izany dia nanao tetikasa famatsiana herinaratra, izay mbola endrika fanampiana ho fampandrosoana amin'izao fotoana izao, ireo ONG sy vondrona tohanan'ny fanjakana sy tsy miankina avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Manao ezaka lehibe amin'ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro
Olana izay idiran'ireo mpisehatra rehetra maneran-tany ny zara fa fisian'ny herinaratra ao Afrika, amin'ny fifantohana indrindra indrindra amin'ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro, noho ilay tanibe manana tombon-dahiny miavaka raha tara-masoandro. Noho izany antony izany no nampindraman'i Korea Atsimo vola 35 lavitrisa dolara an'i Mozambika, efa-taona lasa izay. Natokana ho amin'ny fanamboarana toby anankitelo famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy hanamafisana ny famokarana herinaratra efa misy io vola io. Etsy andanin'izany kosa ny vondrona fifandraisan-davitra Frantsay Orange dia nirotsaka nanangana andry fampifandraisana niisa 1.300 manerana ny tontolo ambanivohitra mba hahafahan'ny mponina mamahana ny findainy.
Rehefa ny fanitarana ny herinaratra aty Afrika no asian-teny, izay any amin'ny faritra Atsimon'i Sahara ny ankamaroany, dia ny angovo azo havaozina no handrian'ny saina mba hamaliana ny filàn'i Afrika, no sady mampiasa araka ny tokony ho izy ny harena voajanahary. Amerikana 30 mpampiasa vola araka izany no nilaza, tamin'ny fiandohan'ny volana Jona tamin'ity taona ity, ny fanirian'izy ireo hamatsy vola mahatratra iray lavitrisa dolara ny fampiroboroboana ny toby famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy toby famokarana herinaratra azo avy amin'ny tohodrano any amin'io ampahany amin'io tanibe io. Mandritry ny dimy taona no itsinjarana io vola io mba hanofanana ihany koa ireo Afrikana manampahaizana eo amin'ny sehatry ny angovo sy hanangonana vola ho fanohanana ireo mpamatsy herinaratra ao an-toerana. Toy izao ny fanambaràna nataon'ny Sekreteran'ny Angovo any Etazonia :
Tsy vahaolana mahomby ho an'ireo firenena any amin'ny iray amin'ireo tanibe tsy mbola manana ny rafitry ny renivohitra ny fahazoana miditra anaty tambajotranà tobim-pamokarana herinaratra […] Fa miaraka aminà vahaolana ahitàna tetikasa tsy misy tambajotra na zavatra tsy lehibe loatra dia afaka mitondra herinaratra ho an'ny tontolo ambanivohitra isika.
EDF, Schneider Electric, orinasa Frantsay mampiasa vola amin'ny tontolo ambanivohitra
Vao haingana no niarahan'ny EDF tamin'ny fikambanana mpamatsy vola iraisam-pirenena SFI (rantsa-mangaikan'ny banky iraisam-pirenena), mba hiasa any amin'ny tontolo ambanivohitra aty amin'ny faritra Afrika atsimon'i Sahara, ka tanjona ny hampiditra ireo mponina 500.000 miaina any amin'io faritra io ho anaty tambajotranà herinaratra. Hanao ny fametrahana ny famatsiana herinaratra tsy misy tambajotra izay tsy dia lafo loatra nefa afaka mamelon-tena ny vondrona frantsay anankiray tarihan'i Henri Proglio. Amin'izao fotoana izao, misy andrana natomboka any Benin eritreretina hanomezana herinaratra olona 25.000 amin'ny fampiasana tambajotra mandray roa:herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro ampivadiana amin'ny solika mavesatra, ampiarahana amin'ny toby mpamokatra angovo ‘bio’. Ho an'i Edward Dahomé, Talen'ny EDF sy ny fahazoana angovo aty Afrika, ny herinaratra dia :
Un produit vital sans lequel aucun vrai développement n’est possible. L’accès à l’énergie des populations rurales, souvent les plus défavorisées, permet de réduire la pauvreté en développant les activités génératrices de revenus, mais aussi l’éducation, la santé, l’accès à l’eau etc.
Vokatra iray tena ilaina fa raha tsy misy azy dia tsy misy fandrosoana vanona. Ny fahazoan'ny mponina any ambanivohitra herinaratra, mazàna ny mahantra indrindra, dia ahafahana mampihena ny fahantrana amin'ny fampiroboroboana ireo asa miteraka fidiram-bola, sy ny fanabeazana ihany koa, ny fahasalamana, ny fahazoana rano sns…
Manao tetikasa maro ilay vondrona mpamokatra herinaratra ka amin'izany no hahafahan'ireo firenena maro mahazo tombontsoa amin'ny fahaiza-manao ananany. Any Botsoana dia ny EDF no nofidian'ny orinasa mpamokatra herinaratra ao an-toerana, ny Botswana Power Corporation, mba hanatanteraka ny fandaharan'asany fizaràna herinaratra any ambanivohitra. Any Mali kosa, niaraka tamin'ny ADEME, namorona ny Orinasa (SDS) ikendrena hanomezana angovo izay tohanan'ny orinasa mpikirakira ny lalàna ao an-toerana ilay goavan'ny angovo. Iraka ho efain'ny SDS ny hanome herinaratra ireo vohitra 20 any amin'ny faritra, amin'ny fampiasana toby madinika mamokatra vaikan-kerinaratra ambany sy antonony ary fenoin'ny angovo azo avy amin'ny solika mavesatra sy ny herin'ny masoandro. Be lavitra noho ny resaka fanampiana ho amin'ny fampandrosoana, dia ahafahan'ny EDF mampahafantatra ny tlotra avy aminy sy mampidera ny fahaizany koa ny tetikasa toy ireny. Efa manana traikefa be dia be amin'ny resaka asa anaty tetikasa mitsinjo ny fanajàna ny tontolo iainana tany Maraoka sy Senegaly ilay vondrona.
Tsy ny EDF ihany no orinasa Frantsay liana amin'ny haben'ny tsena Afrikana. Niditra an-tsehatra ihany koa ny vondrona indostrialy Schneider Electric, rehefa nanambara tamin'ny taona lasa ny faniriany hitondra vahaolana “hampiakatra ny habetsahan'ny herinaratra azo ampiasaina aty Afrika, miaraka amin'ny famatsiam-bola voafetra”. Mifototra amin'ny fampanaraham-penitra ny tambajotra efa misy sy ny fampiroboroboana ny angovo azo havaozina, ary afaka mitahiry hatramin'ny 30 isan-jaton'ny angovo ampiasaina aty amin'ny tanàn-dehibe Afrikana ny tetikasa antsoina hoe “Smart Cities”.
Izao no nolazain'i Mohammed Saad, Filohan'ny Schneider Electric aty Afrika :
Le défi consiste non seulement à produire plus d’électricité, mais aussi à générer une énergie intelligente afin de permettre une croissance intelligente en Afrique.
Tsy famokarana herinaratra betsaka fotsiny ihany no fanamby atao, fa koa famoronana am-pisainana tsara ny angovo, mba hisian'ny firoboroboana mirindra aty Afrika.
Na dia mbola kely aza ny tamberina amin'ny fampiasam-bola entin'ny fanomezana herinaratra ho an'ny mponina ambanivohitra aty Afrika ho an'ireo izay manao izany, dia tohana ho an'ny firoboroboan'ny firenena maro sy mandray anjara amin'ny fahaterahan'ny tsena iray manana ny lanjany ahitàna olona maherin'ny 589 tapitrisa io hetsika io. Mbola mila fampiasam-bola hafa maro anefa mba hanatanterahana izany. Amin'ny taona 2030 hoy ny Banky Iraisam-pirenena dia latsaky ny 60 isan-jaton'ny vahoaka Afrikana no hampiasa jiro any an-tranony, ary fampiasam-bola 40 lavitrisa euros isan-taona no ilaina mba hahafahana mamaly ny filàna herinaratra ho an'ny tanibe iray manontolo.